सिटामोलको सहि सेवन गर्न नजाने घातक – Dainiki Sarokar
सिटामोलको सहि सेवन गर्न नजाने घातक
२०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २२:३५
काठमाडौं । सिटामोल अर्थात् पारासिटामोलको नाम नसुनेको र प्रयोग नगरेको व्यक्ति शायदै कमे होलान्। सिटामोल सबैभन्दा सरल र सुलभ औषधी हो ।
यो औषधि धेरैजसो व्यक्तिले चिकित्सकको परामर्श बिना नै खाने गर्छन । यो सजिलै पाउने भएकाले पनि होला धेरैले व्यक्तिले शरीरिमा समस्या आउँने बित्तिकै खाने गर्छन ।
सिटामोल एक प्रकारको दुखाइ कम गर्ने (पेनकिलर) र ज्वरो कम गर्ने औषधी हो। यसको प्रयोगले मष्तिस्कमा प्रोस्टाग्लान्डीन भन्ने पदार्थको उत्पादनमा कमि ल्याउँछ र हाम्रो दुखाइ सहनसक्ने क्षमतालाई बढाउँने गर्छ । त्यस्तै मष्तिस्कमै रहेको शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने केन्द्रमा असर गरी ज्वरो घटाउने काम गर्छ।
सिटामोलको प्रयोग कहिले गर्ने ?
यसले रोगलाई भन्दा लक्षणलाई मात्र ठिक गर्छ। हाडजोर्नी सम्बन्धि दुखार्इ, विभिन्न प्रकारका टाउको दुखाइ आदीमा यो सेवन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साधारण भाइरल ज्वरोको साथै अन्य संक्रमणले गर्दा आउने ज्वरोहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओस्टियोआर्थाइटिसमा हुने हाडजोर्नीहरुको दुखाइका लागि यो प्रभावकारी हुन्छ।
सिटामोल बढि मात्रामा प्रयोग गरिने अवस्थाहरु
माइग्रेन, टेन्सन हेडएक जस्ता टाउको दुखाइहरुमा,
भाइरल ज्वरो आएमा
ग्यास्ट्राइटिस, पेटको अल्सर भएको अवस्थामा सिटामोल सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि यसले ग्यास्ट्राइटिस बढाउदैन ।
बच्चाहरुमा भाइरल ज्वरो भएको बेला एस्पिरीन दिनाले मष्तिस्क र कलेजोमा घातक असर पार्ने अवस्था रेज सिन्ड्रोम हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सिटामोल सुरक्षित मानिन्छ।
यसको साइड इफेक्ट धेरै कम हुन्छ। गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका महिलाहरुले पनि सुरक्षित रुपमा यसको सेवन गर्न सक्छन्।
यसको अत्यधिक सेवनले कलेजोमा केहि साइड इफेक्ट गर्छ । सिटामोलको मेटाबोलिजम (सरल रसायनमा टुक्राउने प्रक्रिया) कलेजोमा हुन्छ। अत्यधिक सेवनले कलेजोले त्यो मेटाबोलिजम राम्रो र पूर्ण रुपमा गर्न सक्दैन र त्यसका हानिकारक मेटाबोलाइटहरुले कलेजोमा असर गरी एक्युट लिभर फेलर गराउने गर्छ।
एकैपटकमा ७-१० ग्राम सिटामोल (१४-२० वटा ५०० मी.ग्रा.का ट्यावलेटहरु) को सेवनले कलेजोमा यस्तो नराम्रो असर पर्ने गर्छ। बच्चाहरुमा १४० मी.ग्रा./केजी तौल भन्दा बढि सिटामोलको सेवनसँगै कलेजोले काम गर्न छोड्छ। तर कलेजोको रोगी वा रक्सी सेवन गर्नेहरुमा अझ कम मात्राको सेवनमै पनि कलेजोमा खराब असर देखिने गर्छ।
अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित देशहरुमा आत्महत्याका लागि सिटामोलको अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अन्य औषधीहरुसँग यसले कस्तो प्रतिक्रिया गर्छ ?
अन्य औषधीहरुसँग यसले खासै प्रतिक्रिया गर्दैन, तर कलेजोमा मेटाबोलाइज हुने हुनाले कलेजोमा असर गर्ने औषधीहरु जस्तै आइसोनाइजिड, रिफाम्पीन, कारबामेजेपीन आदीले सिटामोलको प्रभावकारीतालाई केहि कम गर्ने गर्छ।’
महिला स्वास्थ्य ।
निर्वाचन आयोगप्रति पोखे,प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि
सेतो पानी बग्ने समस्या लेजर थेरापीद्धारा यसरी निको पार्न सकिन्छ